Rose of Sharon: မောင်(ယုချစ်ခဲ့သော)
Posted by rose of sharon at 1:33 PM
Evy May 21, 2013 at 2:29 PM
တစ်ပုဒ်ဆို ဆိုသလောက် ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ထပ်ရေးဦးနော် မရေ
rose of sharon May 21, 2013 at 4:28 PM
မိုးငွေ့........ May 21, 2013 at 2:56 PM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ဖတ်မိတဲ့ စာနှစ်ပုဒ်လုံးဂေးဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ ဖဘမှာ မယ့်ကိုးတင်ထားတာလဲ ဂေးဇာတ်လမ်းပဲ
rose of sharon May 21, 2013 at 4:29 PM
ဟုတ်ပမိုးရေ... တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော် :)
Every gay haveaproblem with their family.
So, they hide their desire.
I like your concept that u gave me.
ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝတွေပေါ့ ကျေးကျေး
rose of sharon May 21, 2013 at 4:32 PM
Thanks (Anonymous) .I really appreciate your review.
pandora May 21, 2013 at 3:27 PM
rose of sharon May 21, 2013 at 4:33 PM
လသာည May 21, 2013 at 3:39 PM
ရေးထားတာ ကောင်းလိုက်တာ ရိုစ်ရယ်။ အခုတလော အဲလိုတွေ တွေ့နေကြားနေရတယ်။
ထရီဆာ (Teresa) May 21, 2013 at 4:04 PM
အရေးအဖွဲ့လေးက နုနုညံ့ညံ့လေး ..
rose of sharon May 21, 2013 at 4:34 PM
အပြုံးပန်း May 21, 2013 at 4:36 PM
၀တ္ထုတိုလေးမှာ အစကနေ အဆုံးပီပြင်တယ်၊
rose of sharon May 24, 2013 at 10:24 AM
မြသွေးနီ May 22, 2013 at 5:21 PM
ကြုံဖူးတယ်... မြသွေး သူငယ်ချင်းယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်...။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကြိုက်မိတာ..။ နောက်ဆုံး မိန်းမရှာလေး ဖြစ်နေလို့ ..။ အခုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။ ရေးထားတာလေးက အစအဆုံးဆွဲဆောင်သွားတယ်။
ကြည်ဖြူပိုင် June 1, 2013 at 12:18 AM
ဒီဇာတ်လမ်းမျိုးလေးတွေအပြင်မှာတကယ်ရှိနေမှာပဲနော်။ သူတို့ကို တကယ်ချစ်မိတဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးတွေကတော့ အသည်းကွဲပြီး ကျန်ခဲ့မှာပဲ။ သနားပါတယ်။ :(ဇာတ်လမ်းလေးကစွဲဆောင်တယ်